နေရာလေးတစ်ခု — MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော် MZ ထဲလျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာကတော့ ဒီနေရာလေးပါ။ mysteryzillion.com/wiki လေးပါ။ အရင်ကတော့ ၀င်ပြီးအမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ပဲ။ ဒါပေမဲ့သေချာလိုက်ဖတ်ကြည့်တော့မှ ကိုစေတန်တို့ ကိုစည်သူတို့ စတဲ့ MZ က admin တွေရဲ့ စေတနာကို ပိုပြီးလေးစားမိပါတယ်။ တကယ်ပါ။ ကျန်တဲ့သူတွေကိုလည်း အဲဒီနေရာလေးကို လာစေချင်တယ်။ အခြေခံလေ့လာသူတွေက လာရောက်လေ့လာပါ။ တက်ကျွမ်းနားလည်သူတွေက လာရောက်ရေးသားတင်ပြပေးကြပါ။ ဒီနေရာ(mysteryzillion.com/wiki/) လေးကို လူ၀င်နည်းတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ အမှန်က မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အဖွဲ့၀င်ပေါင်းများစွာနဲ့ စည်ကားနေသင့်တဲ့ နေရာလေးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လာရောက်လေ့လာ ဖတ်ရှု့ရေးသား တင်ပြပေးကြပါ။ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာ ၉နှစ်ကလေးက ဘာကြီးကို hack လိုက်တယ်တို့၊ ၁၂ကလေးကို ဘာကိုတီထွင်နေပြီလို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောနေကြားနေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဆိုမြန်မာနိုင်ငံကရော ဘာလို့အဲဒီလို မလုပ်နိုင် မဖြစ်နိုင်တာလဲ။ မြန်မာတွေ ညံလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် သူတို့တွေက သူမတူအောင် တော်နေကြလို့လား။ ကျွန်တော်အမြင်ပြောမယ်နော်... သူတို့တွေ သိနေတတ်နေတာကို ကျွန်တော်အံသြ အထင်ကြီးမှု သိပ်မဖြစ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ သူတို့တွေမှာ ဖတ်ရှု့လေ့လာစရာများပါတယ်။ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို သူတို့ နားလည်တဲ့ ဘာသာစကားနဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ ဒါဆိုနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားလို့ အင်္ဂလိပ်စာ သုံးတဲ့နိုင်ငံတွေတတ်မှာပေါ့လို့ ပြောကြဦးမယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် အခုစာသင်နေတဲ့နိုင်ငံမှာ အင်္ဂလိပ်စာ လုံး၀မသုံးပါဘူး။ သူတို့တွေဟာ အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း မတတ်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာမှာ ထွက်သမျှနည်းပညာအားလုံး သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ဖတ်ရှု့လေလာနိုင်တယ်။ ဒီနေ့အသစ်ထွက် မနက်ဖြန်သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ပြောင်းလဲပြီးပါပြီ။ အဲဒီလောက်နီးနီးမြန်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ .... မြန်မာနိုင်ငံက နည်းပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်ထွက်လာရင် အဲဒီစာအုပ်ထဲက နည်းပညာက ခေတ်ကုန်သွားပြီတဲ့။ ကျွန်တော်ကြားဘူးတာ ပြောတာပါ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဖတ်ဘူးတဲ့လူတွေသိမှာပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ စာဖတ်အားနည်းတော့ သိပ်မသိပါဘူး။ မြန်မာတွေ့ကရော ခေတ်သစ်နည်းပညာကို ကိုယ်မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ လူတိုင်ဖတ်ရှု့လေ့လာရင် လူတော်တွေ ထွက်လာနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မြန်မာမှမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်လူမျိုးမဆို တတ်ကျွမ်းတဲ့ အသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်တွေ ပေါ်ထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကို။ ဒါကြောင့် မြန်မာလူမျိုးတွေ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာထဲက ကွန်ပျူတာနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာများကို ဖတ်ရှု့လေ့လာနိုင်အောင် ဒီ(mysteryzillion.com/wiki/) လေးမှာ သိကျွမ်းတတ်မြောက်တဲ့ ပညာရှင်များက ၀င်ရောက်ရေးသားမျှေ၀ပေးကြပါလို့ ကျွန်တော်ဒီနေရာက တောင်းဆိုပါရစေ။ ဒါမှကမ္ဘာမှာ မြန်မာက သူများထက်မသာတောင် ရင်ဘောင်တန်းနိုင်လာမယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။
ကျွန်တော်အပြောအဆိုမှားခဲ့လျှင် ခွင့်လွတ်သီးခံပေးကြပါ . . .
မှတ်ချက်(အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်စာထင်သလောက်မညံပါဘူး။ သူငယ်တန်းကတည်းက စသင်ခဲ့ရတာပဲ။ သေချာသာ ပြန်မပြောတတ်ရင်နေမယ်။ တော်ရုံတန်ရုံတော့ အကုန်ဖတ်နိုင်ကြပါတယ်။ အဓိက ကစာဖတ်ပျင်းတာပါ။ ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့။ ဒါကြောင့်သူများ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ရေးတာကို ထိုင်စောင့်မဲ့အစား တစ်နေ့နည်းနည်း နည်းနည်းလောက်ဖတ်ရှု့ရင် တစ်လလောက်ကြာရင် စာလည်းတော်တော်ဖတ်လို့ပြီးမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာလည်း တိုးတက်လာနိင်ပါတယ်။)
request * : admin အဖွဲမှလဲ ဖြစ်နိုင်မယ် ဆိုလျှင် ကျွန်တော့ ပိုစ်လေးကို frontpage စာမျက်နှာပေါ်မှာ လူတိုင်းဖတ်ဖြစ်အောင်တင်ထားစေချင်ပါတယ်။
Now I notice it. I'll find some time to contribute too.
But for now, I'm not committed to it, yet!
The *hardest* part is, as you know,translation.
Anyway..thanks for mentioning it.
ထွန်းအိနြ္ဒာဗိုလ် သီချင်းများ ဆိုပြတော့မှာလားလို့ဗျာ ... :2:
ကျွန်တော် MZ ထဲလျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ နေရာတစ်နေရာကို ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနေရာကတော့ ဒီနေရာလေးပါ။ mysteryzillion.com/wiki လေးပါ။ရဲမာန်အောင်
သဘောကျပါတယ်.... ဖြစ်နိုင်တယ် အခြေအနေတွေပါ.....
နည်းပညာအသစ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးလောက်တဲ့အနေအထားနဲ့ ဘာသာပြန်တာတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်..သို့သော်လည်း နည်းပညာတစ်ခုကို သီးသန့် လေ့လာလိုက်စားတဲ့နေရာမှာတော့
မူရင်းဘာသာ စကားတွေတော့ တက်မြောက်သင့်ပါတယ်.... အများဆုံးက english တွေပါ..
နည်းပညာတစ်ခုကို တိတိကျကျလေ့လာလိုက်စားမယ််ဆိုရင် မူရင်းဘာသာစကားက အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်...
သဘောက မြန်မာလိုပြန်တိုင်း မကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိပါတယ်...
ကိုရဲမာန်အောင် ရဲ့ ရေးသားချက်ကို ကြိုဆိုပါတယ်.... ချစ်စွာသော iceos
ကျွန်တော် ဆိုလိုတာလည်း အဲဒီလောက်ပါပဲ။
တိတိကျကျ ဘာသာပြန်ရတာ ခက်တာကတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြေခံလေးတွေ လောက်နဲ့ အသုံး၀င်မှု လောက်ပေါ့ဗျာ။ ဒါမှလည်း စတင်လေ့လာသူတွေ အနေနဲ့ ဘယ်ဟာကောင်းတယ်၊ ဘယ်ဟာက မိမိ၀ါသနာနဲ့ ကိုက်တယ်ဆို တာလောက်ပေါ့ဗျာ။
ပြန်လည် ဆွေးနွေးပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း မြန်မာတွေကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။
အရေးအသားနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုလေးစားပါတယ် ကိုရဲမာန်။ မြန်မာလူမျိုးတွေနည်းပညာတိုးတက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ Mz ကနေတတ်နိုင်သလောက်ပါ၀င်ကူညီကြတာပေါ့ဗျာ။